प्रिमियर लिगमा आर्सनल विजयी | Kendrabindu Nepal Online News
30991302 961461 7442015 22587826
प्रिमियर लिगमा आर्सनल विजयी
१२ फाल्गुन २०७६, सोमबार १०:०९
काठमाडौं । इंग्लिस प्रिमयिर लिगमा आर्सनलले एभर्टनलाई ३–२ ले पराजित गरेकाे छ । पिएरे एमरिक अबामेयाङले दुई गोल गर्दा आर्सनलले महत्वपूर्ण तीन अंक जोडेको हो ।
खेलको पहिलो मिनेटमा नै एभर्टनका काल्भर्ट लेविनले गोल गर्दै टिमलाई अग्रता दिलाएका थिए । २७औं मिनेटमा इडवार्ट एनकेटियाले गोल गर्दै आर्सनललाई खेलमा फर्काए । ३३औं मिनेटमा अबामेयाङले डेविड लुइजसको पासमा गोल गर्दै आर्सनललाई अग्रता दिलाए ।
पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा रिचार्डलिसनले गोल गरेपछि एभर्टनले पहिलो हाफमा आर्सनललाई २–२ गोलको बराबरीमा रोक्न सफल भयो । दोस्रो हाफको एक मिनेट पनि वित्न नपाउँदै अबामेयाङ्ले गोल गर्दै आर्सनललाई अग्रता दिलाए ।
बाँकी समयमा एभर्टन खेलमा फर्किन नसक्दा आर्सनलले जित निकाल्यो । आर्सनल ३७ अंकसहित नवौं स्थानमा छ भने एभर्टन ३६ अंकसहित एघारौं स्थानमा छ ।
Prevराजधानीमा भएका छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु
अनशनरत वडाध्यक्ष पौडेल अस्पताल भर्नाNext
आर्सनलले चेल्सीलाई हराउँदै एफ ए कप फुटबलको उपाधि जित्यो
आर्सनल युरोपा लिगबाट बाहिरियो
त्रिवि आंशिक प्राध्यापक संघमा नयाँ केन्द्रीय कार्य समिति गठन
कति छ आज सुन चाँदीको मूल्य ?
पेट्रोल बोकेको ट्याङ्कर त्रिशुली नदीमा खस्दा आगलागी
१४ औं महाधिवेशनबाट काँग्रेसमा युवा नेताले नेतृत्व पाउने सम्भावना कति ?
नेकपा सचिवालय बैठक आज पेरिसडाँडामा बस्ने